Irenti yeholide eLandhaus Kuessen
Indlu yelizwe i-Kuessen ukusuka kwinkulungwane ye-16 yalungiswa ngothando phakathi kuka-2000 kunye no-2010 kwaye ibekwe kumbindi wendalo ezolileyo emazantsi eMagdalensberg e-Ottmanach. Ukusuka apha unombono omangalisayo ngaphaya kweCarinthia esemazantsi ukuya eKarawanken. Kwiikhilomitha nje ezili-15 ungafikelela kwikomkhulu laseCarinthian iKlagenfurt, emi ngqo kwiLake Wörthersee. Igumbi lethu elihle leholide linokuthatha abantu abadala aba-2 kunye nobuninzi be-1 yomntwana.
Thina, uAlice noFlorian, sijonge phambili kutyelelo lwakho.
Kwindlu yethu entle yeeholide, edityaniswe nendlu enkulu, uya kuchitha iintsuku zokuphumla kwindawo efana nephupha. Le ndlu ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo kwaye inomnyango owahlukileyo, ikhitshi-igumbi lokuhlala, ishawa, indlu yangasese kunye negumbi lokulala elipholileyo. IWi-Fi isimahla kwaye iNetflix kunye neAmazon Prime ziyasebenza kumabonwakude. Akukho nto ime endleleni yeeyure ezipholileyo ehlotyeni.
Ehlotyeni, ichibi le-11x8 m likumema ukuba utshize kwaye ugqatse ilanga. * Ngelishwa, ukusetyenziswa kwe-pool akunakuqinisekiswa.
Indawo emangalisayo yechibi laseCarinthia.
Kukho malunga namachibi angama-2000 apha kwaye onke angamachibi okuhlamba anomgangatho wamanzi okusela. I-Turquoise blue water ikumema ukuba uqubhe kwaye ukhuthaze wonke umntu. Ukuba awuziva ufuna ukuphuma uye elwandle, ungasebenzisa idama lethu elikhulu elinendawo yokutshiswa lilanga ukonwabela ukuphumla iiyure emva koko ngelixa usolisayo.
Ungafikelela kwezona ndawo zintlanu zibalaseleyo zokutyibilika e-Carinthia ngaphakathi kweyure yokuqhuba. Ezi ziquka i-Bad Kleinkirchheim, iGerlitzen, iNassfeld, iPetzen kunye neTurracher Höhe iindawo zeski. Kwindawo ye-ski yaseGerlitzen Alpe, umzekelo, kukho iikhilomitha ezingama-60 zamathambeka kunye ne-15 ski lifts / iimoto zekhebula ezikhoyo. Iilifti zale mihla, iindawo eziphakamileyo ezithambekayo kunye neenkqubo zamva nje zokwenza ikhephu azishiyi nto. Amadlelo e-alpine alawulwayo akumema kwi-snacks emnandi. Kubantu abathanda ukutyibiliza emkhenkceni, kukho iHörzendorfersee okanye iLängsee kwindawo ekufutshane. Ukhenketho olubanzi lokuthenga lunokwenziwa eKlagenfurt. Iivenkile ezininzi, indawo enkulu yokuthenga, indawo yokuhlala yesintu, iindawo zokutyela zamazwe ngamazwe, iikhefi kunye neebhari zikulindele eKlagenfurt.
Siyavuya ukunceda ngeengcebiso zohambo. Sikwakwisiza ixesha elininzi ukuba unayo nayiphi na imibuzo.